प्रतिस्पर्धा | Everest Times UK
प्रतिस्पर्धा (Competition) पनि समयअनुसार फरक–फरक हुने रहेछ । २००२ वरपर जब हामी नेपालीहरुको बेलायतमा आउने र स्थायी या अस्थायी रुपमा बस्नेक्रम सुरु भयों त्यो बेला लगभग हामी सबैले गाडी चलाउने थिएनौं, सबैको सहारा भनेकै स्थानीय सार्वजनिक यातायात थियो । त्यो बेलामा सबैले केवल ‘गाडी’ मात्र भन्थ्यौं, गाडीभित्रका अनेकतामा जाने स्तरको सोच नै थिएन किनकि गाडी चलाउनको लागि लाइसेन्स चाहिने । अब त्यही नभएपछि कुन गाडी ? कस्तो गाडी ? को कुरै भएन ।
अझ हाम्री आमाले त २००६ मा बेलायत घुम्न आउँदा यहाँका सबै गाडी (प्राईभेट)हरुलाई ‘टेउसी’ भन्नुहुन्थ्यो । तिनताका कसैले जब गाडी चलाउँथ्यो त्यसको ‘भाउ’ नै अर्कै थियो, उसको माग नै छुट्टै थियो । म आफै २००४ तिर एस्भेल भन्ने ठाउँमा बिहान जागीरमा जाँदा एक जना मित्रले चलाउने सामान बोक्ने भ्यानको पछाडि़ बसेको अनुभव छ । त्यसमाथि त्यो मित्रको चुरीफुरी त अझ नभनौं । मनमनै सोच्थें कहिल्यै यसरी नै बेलायतमा मैले पनि गाडी चलाउन सकुँला र पाउँला ? समय बित्दै गयो तपाई÷हामी सबैलाई गाडी चलाउनै पर्छ भन्ने ज्ञान हुँदै गयो, सिक्दै गयौं । गाडीहरु किन्दै गयौं । अब प्रतिस्पर्धा सुरु भयो लाइसेन्स हुने या नहुनेमा, गाडी हुने र नहुनेमा । जमघटहरुमा पनि यही विषय प्रमुख हुन थाल्यो, लाइसेन्स हुने या गाडी हुनेहरुलाई हेर्ने नजर या धारणा नै फरक हुन थाल्यो ।
गाडी या लाइसेन्स नहुनेहरुलाई पनि जसरी पनि लिने या जस्तो भए पनि एउटा गाडी किनेर गाडीवाला बन्ने होड़ नै चल्यो । समय सँगसँगै हामीमा यो होड त्यही रोकिएन यसभित्रका अनेक कुरामा सर्‍यो, पहिले ‘गाडी’ मात्र सीमित होड बिस्तारै गाडीको ब्राण्डमा सर्‍यो । ‘फलानाको त टोयोटा छ, फलानीले त विचरा अझै पुरानै फोर्ड नै चलाउँदै रहिछ’ आदि इत्यादि । यो होडले किन छोड्थ्यो र हामी नेपालीहरुलाई किनकि हामी नेपालीहरु आफ्नै अन्तर्मनले सोचेको त कहाँ गर्छौं र ? अरुले के भन्ला ? त्यसको अगाडि त ? उसको भन्दा त ? त्यो भन्दा त पहिले नै मैले !!! आदि खालका होडमा त हामी विश्वविजेता नै छौं ।
गाडीको ब्राण्डको होड अब कति ‘पुरानो गाडी’मा होमियो, जमघटहरुमा कसैलाई चिनाइन पर्‍यो भने पनि ‘थाहा छैन ? त्यो २०१९ को ज्यागुयर (Jaguar) चलाउने क्या !’ । ‘उनी क्या त ! जसलाई उनका श्रीमान्ले जन्मदिनको गिफ्टमैं 2018 Registration Range Rover Velar S दिएका थिए नि !’ आदि आदि । प्रतिस्पर्धा चलेकै छ । सक्नेहरुले किनेका छन्, चलाएका छन् र जसले सकेका छैनन् । उनीहरुमा नैराश्यताको मात्रा बढ्दो छ । कतिले नेपालमा भएका जग्गा बेचेर पनि यहाँको प्रतिस्पर्धाको घमासानमा होमिएका छन् । कोही आफन्तले बिएमडब्ल्यु ‘ज्ञड को लिएछ भनेर आँफ्नो ‘ज्ञट को संग ‘ज्ञढ को साट्न आतुर छ त कोही नम्बरीलाई जित्न लोन नै लिएर मर्सिडीज बुक गर्दैछ, यस्तो लाग्छ हामी नेपाली एकापसमा प्रतिस्पर्धाकै निम्ती जन्मेका हौं । यो त हाम्रो दैनिकीसँग जोडिएको एउटामात्रै विषय हो तर यहाँ यस्तै अनेक अन्य विषयहरु छन् जसलाई लिएर हामी नेपालीहरु ‘घन घोंटी बन्चरो’ गरेर कम्पिटिसन गर्दैछौं । छोराछोरीका स्कुल कलेजका रिजÞल्टमा कति स्टार आए भन्ने कम्पिटिसन, सुनमा कम्पिटिसन, घरमा कम्पिटिसन, अझ आजकल त ‘कतिवटा घर ?’ तिर पो जाँदैछौं त । बैठक कोठामा सजावटमा कम्पिटिसन, गहनामा कम्पिटिसन, पार्टी गर्नका लागि कम्पिटिसन, हुँदाहुँदै अहिले त ‘त्यो फलानोकोमा त भात पनि चाँदीका थालमा र वियर पनि चाँदीका ग्लासमा दिन्छन रे… आफ्नो त !!!’ भनेर दुःख मनाइरहनेहरु पनि भेट्न सकिन्छ ।
हो, प्रगतिको लागि प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ तर यति धेरै र आवश्यकता नै नभएको प्रतिस्पर्धाले हामीलाई फाइदा होला र ? यस्ता अस्वस्थ र अनावश्यक कम्पिटिसनले अन्ततः हाम्रो शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असरमात्रै पार्दैन कि यसले हाम्रो समाजका सदस्यहरु एकापसमा नकारात्मक भावना पनि भित्र्याउँछ । जानेर या अज्ञानतामै हामी अनावश्यक प्रतिस्पर्धात्मक दौडमा आफ्नैहरुलाई पनि प्रतिस्पर्धी बनाउँदै छौं । अनावश्यक कम्पिटिसनले मानसिक तनाव बढाउँदछ, मानसिक तनावले निन्द्रा लाग्दैन, आवश्यकताभन्दा कम निदाउनु कुनै पनि रोगलाई निमन्त्रणा गर्नु हो ।
के यो जरुरी छ ? कसरी यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ? यसबारेमा बेलैमा सोचेनौं भने हामीले यसबाट हुने नकारात्मक प्रभावको सामना गर्न कठिन हुने छ । सबैको जय होस्..।